Qiime suuqeed - Wikipedia
Qiime Suuqeed (Ingiriisi: Market value) Waa sicirka ay wadaagaan mid ka mid ah hantida hab ku dhisan tartan. Sida badan waxaa loo adeegsadaa qiime suuqeed isdhaafsi leh Qiime Suudeed Furan ama Qiime loo dhanyahay ama Qiime suuqeed loo dhanyahay, iyada oo ay jirto haddana ereyadaas waxa ay leeyihiin qeexitaanno u gooni ah hab ah halbeegyo kala duwan, wayna kala duwnaan karaan duruufaha qaar.
Waxa loo yaqaan halbeegyada qiimayneed ee caalamiga ah Qiime suuqeed in ay tahay "qiime lawada ogyahay kaasoo ay dhacayso in la isdhaafsado hanti uun ee taariikh qiimayn ka dhexaysa iibsade diyaar ah iibiye diyaar ah ee ah hab heshiis udhexeeya dhinacyo kala madaxbannaan dano ahaan kaddib kala iibsi qumman, taasoo labada dhenac ka dhigaysa kuwo u dhaqmaya ogaal xikmadeysan iyo isdhibsi la'an."
Qiime suuqeed waa fahan ka gaar ah Sicir suuq, kaasoo lagu yaqaan in uu yahay "Sicirkii ay suuragal u ah qofka in uu qabto howl lagula macaamili karo", halka uu qiime suuqeedku yahay "qiime dhab ah ee qarsoon" sida uu qabo halbeegga aragtida. Waxaa la soo hadal qaadaa qaabkaan sida badan marka laga hadlayo xaaladaha Suuqyada aan awoodda lahayn ama aysan jirin dhellitirnaan, taasoo aan oollin sicir suuqa ka baxsan mugdi galinaya qiime suuqeedka qarsoon ee xaqiiqiga ah. Si uu u noqdo sicirka suuqa mid qiime suuqeedkiisa loo dhan yahay, waa in uu yeeshaa suuqa awood macluumaad leh waana in uu ahaadaa mid mala awaalka la jaan qaadi kara.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qiime_suuqeed&oldid=164810"
Last edited on 29 Diseembar 2016, at 14:40
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Diseembar 2016, marka ee eheed 14:40.